ကြေညာချက်အမှတ် ( ၁၁/၂၀၂၁)
30 October 2021 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရhttps://nugmyanmar.orgကြေညာချက်အမှတ် ( ၁၁/၂၀၂၁)၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက်၁။ ချင်းပြည်နယ်၊ ထန်တလန်မြို့တွင်ရောက်ရှိအခြေပြုနေသော အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့သည် ယမန် နေ့ (၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့) နံနက်ပိုင်းတွင် မြို့ပေါ်ရှိဒေသခံပြည်သူများ၏နေအိမ်များကို လက်နက်ကြီးများဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်မှု၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများကြောင့် ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီ အချိန်အထိ ဒေသခံပြည်သူများနှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံမှသတင်းပေးပို့မှု ရရှိချက်အရ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်းနှင့် သာသနိကအဆောက်အဦးများအနည်းဆုံးသုံးခုအပါအဝင် လူနေအိမ် ၁၆၄ လုံးထက်မနည်း မီးလောင်ကျွမ်းပျက်စီး ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း ကနဦးသိရှိရခြင်းအတွက် များစွာတုန်လှုပ်ခြောက်ခြား ဖြစ်ရပါသည်။ ၂။ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ကလည်း ထန်တလန်မြို့ပေါ်ရှိ လူနေအိမ် များအား လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လူနေအိမ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် ပျက်စီး ခဲ့ရပြီး၊ သင်းအုပ်ဆရာတော်တစ်ပါးသေဆုံးခဲ့ရကာ၊ မြို့ပေါ်ရှိဒေသခံပြည်သူများအားလုံးနီးပါး ဘေးလွတ်ရာသို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အတူ လွန်ခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကလည်း ချင်းပြည်နယ် ဖလမ်းမြို့နယ်ရှိ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာများဖြစ်သော ရယ်လ်သီး (Rialti)၊ တလန်ရောန် (Thlanrawn)၊ တားလ် (Taal) နှင့် ရမ်ထလို (Ramthlo) တို့တွင် လက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်း၊ မီးရှို့ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း တစ်ကျောင်းအပါအဝင် လူနေအိမ် ၃၅ လုံးမီးလောင်ကျွမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး၊ အနည်းဆုံး လူနေအိမ် အလုံး ၁၀၀ မှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။၃။ ထို့အတူ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ကယား (ကရင်နီ)ပြည်နယ်တွင် လွိုင်ကော်နှင့် ဒီမောဆိုမြို့နယ် များတွင် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် လူနေအိမ် ၂၆၇ လုံးနှင့် ရှမ်း ပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်တွင် လူနေအိမ် ၅၈ လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံ တာဝန်ရှိများ၏သတင်းပေးပို့ချက်အရ သိရှိရသည်။ ထို့အတူ ယမန်နေ့ကလည်း မိုးဗြဲနယ်တွင် စစ်ကောင်စီတပ် ဖွဲ့ဝင်များ၏ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများရှိခဲ့ပြီး၊ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုစာရင်းအတိအကျရရှိနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။၄။ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များသည် ချင်းပြည်နယ်နှင့် ကယား (ကရင်နီ)ပြည်နယ်အပါအဝင် မြန်မာ နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် ဒေသခံပြည်သူများပိုင်ဆိုင်သည့်နေအိမ်အဆောက်အဦးများကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ပြည်သူများ ပိုင်ဆိုင်သည့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်းအပါအဝင် အဖိုးတန်ပစ္စည်းဥစ္စာများကို သိမ်းပိုက်ယူငင်ခြင်း၊ သာသနိက အဆောက်အဦးများတွင် တပ်စွဲလျက် သက်ဆိုင်ရာဘာသာဝင်များ အထွဋ်အမြတ်ထားသည့် ဘာသာရေး အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းများအား ဖျက်ဆီးခြင်း၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများအပေါ် စိတ်ထင်သလို အကြမ်းဖက်ပြုမူခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းများ အစရှိသည့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို နေ့စဉ်ရက်ဆက်ကျူးလွန်လျက်ရှိသည်။ ၅။ ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များအား ရှိသည့်နေရာတွင်၊ ရှိသည့်နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် ဆက်လက် ခုခံဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ကြရန်နှင့် မြေပြင်တွင်ခုခံတွန်း လှန်မှုပြုလုပ်နေကြသည့် ပြည်သူ့သူရဲကောင်းများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဆက်လက်ထောက်ပံ့ကူညီပေးကြရန် အလေးအနက် တိုက်တွန်းပန်ကြားအပ်ပါသည်။ ၆။ ထို့အတူ စစ်ကောင်စီ၏ယန္တရားအဆင့်ဆင့်တွင်အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေရ သူများအနေဖြင့်လည်း စစ်ကောင်စီ၏ယန္တရားအဆင့်ဆင့်နှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကို အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပြီး၊ မိမိတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်လူသားတန်ဖိုးအတွက် ပြည်သူနှင့်အတူ အလျင်အမြန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်လည်း အလေးအနက်တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ၇။ အာဆီယံနှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးတို့အပါအဝင် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနှင့် လူသားဂုဏ်သိက္ခာကို အလေးအမြတ်ပြုတန်ဖိုးထားကြသည့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းများအနေဖြင့်လည်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင် စီ၏ အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်သိရှိပြီး၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကယား (ကရင်နီ) ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မကွေးတိုင်းတို့အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းတွင် စစ်ကောင်စီကြောင့် အရပ်သားပြည်သူများ ဒုက္ခမျိုးစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားနေရမှုကို အမြန်ဆုံးရပ်တန့်နိုင်ရေးအတွက် ထိရောက် သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအလျင်အမြန်ပြုလုပ်နိုင်ရန် အလေးအနက်တိုက်တွန်းပန်ကြားအပ်ပါသည်။၈။ ယမန်နေ့က ချင်းပြည်နယ်၊ ထန်တလန်မြို့တွင် စစ်ကောင်စီမှပြုမူခဲ့သောကိစ္စရပ်အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင် စစ်ကောင်စီမှပြုမူသောအကြမ်းဖက်မှုများအတွက် ပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကြောင်းနှင့် စစ်ကောင်စီ ကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲမှုမျိုးစုံကြုံတွေ့နေရသည့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအား မိမိတို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်သူအတွက်ပြည်သူကရပ်တည်ကြမည်ဟူသောဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ တတ်နိုင်သမျှ ကူညီ ထောက်ပံ့မှုများ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။
မြန်မာဦးဆောင်တင်သွင်းတဲ့ နျူကလီးယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးဆိုင်ရာအဆို ကုလသမဂ္ဂအတည်ပြု
28 October 2021 သတင်း
(၇၆) ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၊ ပထမကော်မတီ (လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးနှင့် နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးကော်မတီ) ၌ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဦးဆောင်တင်သွင်းသည့် နျူကလီးယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုမူကြမ်းအား အတည်ပြု (နယူးယောက်မြို့၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်)၁။ (၇၆) ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၊ ပထမကော်မတီ၏ ယနေ့ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးတွင် နျူကလီးယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းစဉ်အောက်မှ တင်သွင်းသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုမူကြမ်းများကို အရေးယူအတည်ပြုခဲ့ပါသည်။၂။ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းက မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ စတင်၍ သဘောထားချင်းတူညီသည့် နိုင်ငံများနှင့်အတူ နျူကလီးယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုမူကြမ်းကို နှစ်စဉ်တင်သွင်းခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအဆိုမူကြမ်းသည် ယခင်နှစ် တင်သွင်းခဲ့သည့် အဆိုမူကြမ်းအပေါ် technical update နှင့် factual update သာ ပြုလုပ်ထား ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုမူကြမ်းတွင် နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်သည့် နိုင်ငံများအနေဖြင့် နျူကလီးယား လက်နက်ဖျက်သိမ်းမှုများကို သတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်အတွင်း ဖျက်သိမ်းရန်၊ နျူကလီးယားလက်နက်ကင်းမဲ့ဇုံများ တည်ထောင်ရန်၊ နျူကလီးယားလက်နက်များ အရည်အသွေးပိုင်း ဆိုင်ရာ မြှင့်တင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်မှုများကို ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းရန်၊ နျူကလီးယားလက်နက်များ လျှော့ချရေးကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်၊ နျူကလီးယားလက်နက်များ အလုံးစုံဖျက်သိမ်းရေးဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း တစ်ခုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးညီလာခံတွင် ဆွေးနွေးရန်၊ Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) အာဏာသက်ဝင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ရန် စသည့် အချက်များကို တိုက်တွန်းထားကြောင်း၊ ယခင်နှစ်များတွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ ထောက်ခံပေးခဲ့မှုများ အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့် ယခုနှစ်တွင်လည်း ဤဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုအပေါ် ဆက်လက် ထောက်ခံပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါကြောင်းဖြင့် ပြောကြား၍ အဆိုမူကြမ်းကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ၃။ ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဦးဆောင်တင်သွင်းသည့် အဆိုပါ နျူကလီးယားလက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်း A/C.1/76/L.39 ကို မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ ထောက်ခံမဲ (၁၁၉) မဲ၊ ကန့်ကွက်မဲ (၄၁) မဲ၊ ကြားနေမဲ (၂၃) မဲ ဖြင့် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။ ၄။ အဆိုပါအတည်ပြုခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် အဆိုမူကြမ်းကို ပူးတွဲဖော်ပြအပ်ပါသည်။ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၇ ရက်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၊ နယူးယောက်မြို့။
၂၀၂၁ခုနှစ်၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) ထိပ်သီးအစည်းအဝေး မိန့်ခွန်း
27 October 2021 မိန့်ခွန်းများ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG)၂၀၂၁ခုနှစ်၊ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) ထိပ်သီးအစည်းအဝေး မိန့်ခွန်း(မြန်မာဘာသာပြန်)၂၀၂၁ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၂) ရက်ဂုဏ်သရေရှိနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များခင်ဗျာပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG)မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသူများအားလုံးကို ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်အာဏာသိမ်းအုပ်စုကြောင့် ဖြစ်ပါ်လာသည့် အကျပ်အတည်းများကို ဖြေရှင်းရန် ဆက်လက် ကြိုးစားအားထုတ်မှုများအတွက် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း NUG အနေဖြင့် ပြောကြားလိုပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းများက ဒေသတွင်း လုံခြုံရေးအပေါ် သာမက အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများနှင့် ၎င်းတို့၏ ပြည်သူလူထုအပေါ် ကြီးမားသော ခြိမ်းခြောက်မှု တစ်ရပ် ဖြစ်နေပါသည်။ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် NUG ၏ ယာယီသမ္မတအဖြစ် ထမ်းဆောင်နေသူ ကျွန်တော် လူကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ကာ မိန့်ခွန်း မပြောကြားနိုင်သည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ NUG အစိုးရအနေဖြင့် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါသည်။ ၂၀၂၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်တွင် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအနေဖြင့် တရားမဝင် စစ်အာဏာသိမ်းအုပ်စု ကိုယ်စားလှယ်များကို ငြင်းပယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကြိုဆိုပါသည်။ သို့သော်လည်း ဤဆုံးဖြတ်ချက်၏ နောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ NUG အစိုးရကို တက်ရောက်ရန် ဖိတ်ခေါ်သင့် ပါသည်။ “နိုင်ငံရေးအရ ကိုယ်စားမပြုသူ” တစ်ဦးကို ဖိတ်ကြားရန်ဆိုသော ကြားကာလလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြောရလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဦးတည်းသာလျှင် မိမိကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး တရားဝင်ခိုင်မာသော အစိုးရဖြစ်သည့် NUG ကသာလျှင် ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်ရမည် ဆိုသည့် အချက်ကို NUG က ဆက်လက် ခိုင်မာစွာ ခံယူထားပါသည်။ လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်မပြည့်ခင်က ဒီမိုကရေစီနည်းကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံထားရသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် NUG ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာပြည်သူလူထု၏ တစ်ခဲနက် ထောက်ခံမှုကို ရရှိထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွင် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ဆက်လက်ရှိနေကြောင်းကို ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီ၊ အထွေထွေညီလာခံနှင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့က အတည်ပြုထားကြပါသည်။ ထို့အပြင် ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးများတွင် NUG ၏ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်မှ ဆက်လက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ရရှိရေးနှင့် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်မှုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ NUG က အာဆီယံနှင့် မိတ်ဖက်ဖွဲ့လုပ်ဆောင်ရန် အသင့်ရှိပါသည်။ အထူးသံတမန် အာရီဝမ် ယူဆော့ဖ်၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ကြိုဆိုပြီး ၎င်းကြိုးစားမှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း ဖော်ပြလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူနှင့် အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ဆက်လက်၍ ပူး‌ပေါင်းလုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ တူညီဆန္ဒငါးရပ်နှင့်အညီ အရေးပေါ်လိုအပ်နေသော လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ၊ သေချာစွာ ပေးအပ်နိုင်ရေးအတွက် အာဆီယံနှင့် အလုပ်လုပ်သွားရန် ကျွန်ုပ်တို့ သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါသည်။ NUG က ထိုကတိကဝတ်များကို အဆွေတော်တို့ထံ ကမ်းလှမ်းနေချိန်တွင် စစ်အာဏာသိမ်းအုပ်စု အနေဖြင့် အာဆီယံကို အားနည်းအောင် လုပ်နိုင်သမျှ အမျိုးမျိုးလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ သူတို့ ပေးထားသော ကတိကဝတ်များကို လုပ်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပြီး အထူးသံတမန်၏ ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုများကိုလည်း ထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့ပါသည်။ စစ်ကောင်စီသည် ဒေသတစ်ခုလုံးကို ခြိမ်းခြောက် နေသည့် အသက်အန္တရာယ်ကို ထိပါးစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါကိုလည်း လက်နက် သဖွယ် အသုံးချနေပါသည်။ ယနေ့ အဆွေတော်များကို ယခုကဲ့သို့ မိန့်ခွန်းပြောနေချိန်တွင် စစ်အာဏာသိမ်းအုပ်စုက လူပေါင်းများစွာ ကို ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်နေမှုကို တိုးမြှင့်နိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအဖြစ် တပ်ဖွဲ့များကို စုစည်းနေ ပါသည်။ ၎င်းတို့ စစ်ရှုံးနေသောကြောင့် စိတ်ပျက်နေသည့် စစ်တပ်သည် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုစသည့် သူတို့ အကျွမ်းကျင်ဆုံး နည်းလမ်းများကို တစ်ကျော့ပြန် အသုံးပြုလျက် ရှိပါသည်။ အတိတ်၌ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် လူသတ်မှု၊ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှု၊ လူပေါင်းများစွာ ပျောက်ဆုံးမှုနှင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်မှုများ ခေတ်သစ်မြန်မာပြည်တွင် တစ်ကြိမ်မှ မကြုံဖူးခဲ့သည့် အတိုင်းအတာဖြင့် များပြားစွာ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အလားအလာကို အာဆီယံကလည်း မျက်မြင်သက်သေအဖြစ် မြင်တွေ့ သက်သေခံရပါတော့မည်။ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ အလျှော့ မပေးဘဲ ပြတ်ပြတ်သားသား တုန့်ပြန်မှသာလျှင် ၎င်းတို့ကို တားဆီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များခင်ဗျာNUG သည် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟူသည့် နာမည်နှင့်အညီ ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဆောင် သွားမည် ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်ကို စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းအားဖြင့် အုပ်ချုပ်ပါမည်။ အားလုံးပါဝင်မှုရှိသော အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီနှင့်အတူ လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှုနှင့် တန်းတူညီမျှမှုကို အခြေခံပြီး ငြိမ်းချမ်းသော ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတစ်ခု တည်ဆောက်ရေး၊ တူညီသော မျှော်မှန်းချက်ကို ဆောင်ရွက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ သန္နိဋ္ဌာန်ချမှတ်ထားပါသည်။ ထိုအခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင် NUG က ဒီမိုကရေစီ အပြည့်အဝ ရရှိရေးအတွက် ကြားကာလ၊ အသွင်ကူးပြောင်းကာလနှင့် နောက်ဆုံး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ အပြည့်အဝ ရရှိအောင်မြင်ပြီးကာလ ဟူ၍ အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် လမ်းပြမြေပုံကို ရေးဆွဲထားပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ရှိအချိန်တွင် ကြားကာလအတွင်း၌ ရောက်ရှိနေပြီး ဒီမိုကရက်တစ် အရပ်သား အစိုးရ ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည့်အထိ ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဆိုရာတွင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များ စစ်ဝတ်စုံကို အရပ်သားဝတ်စုံအဖြစ် ပြောင်းဝတ်ပြခြင်းကို မဆိုလိုပါ။ NUG ၏ အုပ်ချုပ်မှုကိုသာ ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းမှု မအောင်မြင်ခဲ့သည့် (၉) လအတွင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH က ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပဋိညာဉ်ကို ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ ကို ဖွဲ့စည်းကာ ကိုယ်စားပြုမှုရှိသော ဒီမိုကရက်တစ် အစိုးရတစ်ရပ်ကို ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ အတိတ်က အရှက်ရဖွယ် ကျရှုံးမှုများ - အထူးသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများနှင့် အခြား လူနည်းစုများအပေါ် ရက်စက်ယုတ်မာမှုများကို ဖြေရှင်းရန် စုပေါင်းအင်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် တာဝန်ခံမှုရရှိရေးအတွက် တက်ကြွစွာ ဖော်ဆောင်လျက်ရှိပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်ခုံရုံး၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို အားကောင်းလာစေရန်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တရားရုံး၏ စစ်ဆေးသုံးသပ်မှုများကို ပံ့ပိုးကူညီရန် ကတိကဝတ်ပြုထားပါသည်။ နိုင်ငံများနှင့်လည်း သံတမန် ဆက်ဆံရေးများ တည်ထောင်ထားပါသည်။ ထို့အပြင် စစ်အာဏာသိမ်းအုပ်စု၏ ရက်စက်ယုတ်မာမှုများ ကို ပြည်သူများက ဆန့်ကျင်ပြီး ခုခံကာကွယ်ကြရန် နှိုးဆော်နေချိန်တွင် ခုခံကာကွယ်ရေး လုပ်ဆောင် ချက်များအားလုံးသည် နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ တိကျရှင်းလင်းစွာ တောင်းဆိုထားပါသည်။ ဤအချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ဖြစ်ပြီး အကြမ်းဖက် စစ်တပ်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အစိုးရ၏ ခြားနားချက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များခင်ဗျာအဆွေတော်တို့အတွက် NUG ဟုဆိုရာတွင် မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် သန္နိဋ္ဌာန်ချထားသော၊ အာဆီယံ မိတ်ဖက်များနှင့် အတူ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်ရန်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေသအတွင်း တည်ငြိမ်ရေး၊ ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးနှင့် သာယာဝပြောရေးအတွက် ကတိကဝတ်ပြုထားသော မိတ်ဖက်ဖြစ်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို တိုးတက်အောင်လုပ်ပြီး စီးပွားရေးကို ပြန်လည် တည်ဆောက်ကာ လုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီး အရပ်ဘက် ထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့ လုံးလုံးလျားလျား ခေါ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကာ ထိုကြိုးစား အားထုတ်မှုများ အားလုံး၏ အနှစ်သာရအနေဖြင့် အားလုံးပါဝင်မှု၊ လက်ခံမှု ၊ တရားမျှတမှုနှင့် တန်းတူညီမျှမှုတို့ကို ထားရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ စစ်အာဏာသိမ်းအုပ်စုအနေဖြင့်မူ အဆွေတော်များထံသို့ နယ်စပ်များနှင့် ပင်လယ်များကို ဖြတ်ကျော်ယိုဖိတ် လာမည့် စစ်မက်ရန်ပွဲနှင့် ကပ်ရောဂါဆိုးများကို ဆက်လက် သယ်ဆောင်လာမည် ဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကိုပါ ထိခိုက်လျော့ပါးစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် အနှစ်သာရမဲ့သည့် အတုအယောင် ကတိကဝတ်များပေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေသအတွင်းသို့ အရှက်တရားနှင့် စစ်မက်ရန်ပွဲကိုသာ ဆက်လက် ယူဆောင်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် NUG က မိမိတို့၏ အာဆီယံ မိတ်ဖက်များအား အောက်ပါအချက်များကို တောင်းဆိုလို ပါသည် - ၁။ ကျွန်ုပ်တို့အား မြန်မာပြည်သူများကို ကိုယ်စားပြုသည့် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပေးရန်။၂။ အရေအတွက်တိုးလာသော အကူအညီ အလွန်အမင်းလိုအပ်နေသည့် ပြည်သူများအား လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှု အကူအညီပေးနိုင်ရေး နှင့် ဆေးဝါးအကူအညီပေးနိုင်ရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အမြန်ဆုံးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန်။၃။ စစ်အာဏာသိမ်း အုပ်စုကို ၎င်းတို့၏လက်နက်များ၊ ငွေကြေးများနှင့် ပြစ်ဒဏ်မဲ့ ကင်းလွတ်နေမှု များကို ခမ်းခြောက်သွားအောင် အကူအညီပေးရန်။ မြန်မာပြည်သူလူထု အပေါ် ကျူးလွန်သည့် ထိခိုက် ပျက်စီးမှုများသည် အာဆီယံ ပြည်သူအားလုံးအပေါ် သက်ရောက်သည့် ဒုက္ခဖြစ်ပါသည်။ASEAN အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအနေဖြင့် လိုက်နာရမည့် တာဝန်များနှင့် နိုင်ငံများ၏ ဘုံအကျိုးစီးပွားဖြစ်သည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် တိုးတက်ဝပြောရေးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် NUG အနေဖြင့် အပြည့်အဝရပ်တည်သည်။ ယခုကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် အာဆီယံ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး လမ်းသစ်၏ တာထွက်ဖြစ်လာစေရန်လည်းမျှော်လင့်ပါသည်။ ကဏ္ဍပေါင်းစုံမှ စစ်အာဏာရှင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူများနှင့်ဒေသ၏ ပဋိပက္ခများကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ (ဒူဝါလရှီးလ)ယာယီသမ္မတအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်
Appointment of NUG Ambassador to ASEAN
26 October 2021 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
Ministry of Foreign Affairs National Unity Government Republic of the Union of Myanmar Notification No (8/ 2021) 4" Waning of Thadingyut 1383 ME (24 October 2021) Appointment of NUG Ambassador to ASEAN To promote the relations and cooperation between the Republic of the Union of Myanmar and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the National Unity Government of Myanmar has appointed Mr. Bo Hla Tint as the Ambassador of National Unity Government of the Republic of the Union of Myanmar to the ASEAN as of 24" October 2021. Zin Mar Aung Union Minister Ministry of Foreign Affairs Copy to: Union Minister, Ministry of Foreign Affairs Union Minister, Ministry of International Cooperation Deputy Minister, Ministry of Foreign Affairs Office of the NUG Ambassador to ASEAN Personal file/Float file Biography of U Bo Hla Tint Ambassador of National Unity Government (NUG) to ASEAN U Bo Hla Tint was born on December 23, 1957. He grew up at Gaung Oo Bar Village, Western Mogok, Mandalay Division, with his seven siblings. U Bo Hla Tint is currently residing with his family in the State of Maryland, USA while remaining active asamember of the NLD International Network. He obtainedabachelor’s degree in Civil Engineering from Yangon Institute of Technology (B.E Civil) in 1981. U Bo Hla Tint joined the National League for Democracy (NLD) and served asaparty organizer for Western Mogok after being imprisoned for participating in the 8888 nationwide movements against the Tatmadaw-led State Law and Order Restoration Council (SLORC). In 1990 multiparty democratic elections, he was elected asamember of the parliament representing Mogok Constituency No.2. He was actively involved in forming the National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB) in 1990. He was initially appointed as Construction Minister, and later served as Minister for Mining Ministry. He was later appointed as the chairperson of the Finance Committee and subsequently as the Minister for Foreign Affairs. In 1993, U Bo Hla Tint took part in the NCGUB delegation led by Prime Minister Dr. Sein Win to the UN General Assembly in New York. The SLORC prevented the return of the NCGUB delegation to their headquarters in Myanmar, which led to U Bo Hla Tint seeking political asylum in the United States. While in the US, he served as Chairperson of the NCGUB, and the Minister for Foreign Affairs based at the NCGUB Washington DC office until the NCGUB was abolished in 2012.
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (SNLD)၏ (၃၃)နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့သို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလမှ ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာ
၂၀၂၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၆ရက်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြတ်ကျဆုံးရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီစနစ် ထွန်းကားလာရေးအတွက်သာမက နှစ်ပေါင်း(၆၀)ကျော် ကြာ ပြည်တွင်းရေးပဋိပက္ခကို အဆုံးသတ်စေမည့် ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ထွန်းကားလာရေးအတွက် တစိုက်မတ်မတ်ရပ်တည်ဆောင်ရွက်နေသည့် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (Shan Nationalities League for Democracy - SNLD) ၏ ယနေ့ကျရောက်သည့် (၃၃) နှစ်ပြည့်မြောက်သည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့အား အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ ယာယီသမ္မတမှ ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။ဒူဝါလရှီးလယာယီသမ္မတအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ
(၆၁) နှစ်မြောက် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (Kachin Independence Organization-KIO) ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်နေ့သို့ပေးပို့သည့် သဝဏ်လွှာ
25 October 2021 သတင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရhttps://nugmyanmar.org၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်၁။ ယနေ့သည် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (Kachin Independence Organization-KIO) ဖွဲ့စည်းတည်ထောင် ခြင်း (၆၁) နှစ်မြောက် နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဖျက်သိမ်းရေးနှင့် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ထောင်ရေးကြိုးပမ်းမှု၏ အမှတ်သညာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ၂။ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သည့် ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့သည် စတင်တည်ထောင်စဉ်က ကချင်လူမျိုးနှင့် ကချင်ဒေသလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်း၊ ယခုအခါ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက် ကျရောက်နစ်မွန်းပြီး ဒုက္ခမျိုးစုံရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရလျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအတွက်၊ တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးရှေ့မှ၊ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးနှင့်အတူ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ခုခံတွန်းလှန်နေပြီဖြစ်သည်။၃။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပင်လုံစာချုပ်တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် လွတ်လပ်သည့် ကချင်တောင်တန်းဒေသသည် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိလာသည့်အခါ ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် ကချင်ပြည် နယ်အဖြစ် ပါဝင်လာခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် အိမ်စောင့်အစိုးရပေါ်ပေါက်လာခြင်း၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အာဏာကို မြန်မာ့တပ်မတော်မှသိမ်းပိုက်ရယူလိုက်ခြင်းတို့နှင့်အတူ ကချင်လူမျိုးများအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံ ထူထောင်ရေးရည်မှန်းချက်သည်လည်း မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့ရသည်။၄။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်မှနိုင်ငံတော်အာဏာကို ထပ်မံသိမ်းပိုက်ရယူလိုက် သည်သာမက စစ်အာဏာသိမ်းယူမှုကို အကြမ်းမဖက်ဆန့်ကျင်ကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသား တိုင်းရင်း သားပြည်သူများအား အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခြင်း၊ မတရားဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ပြည်သူများ၏အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကိုလုယူဖျက်ဆီးခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးများချိုးဖောက်ခြင်းစသည်တို့ကို ပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့သည် ပြည်သူနှင့်အတူရပ်တည်လျက် ပြည်သူ့တပ်ဦးရှေ့မှ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကို ခုခံတွန်းလှန်ခြင်းတွင် ပါဝင်ဦးဆောင်လျက်ရှိသည်ကို တိုင်းရင်းသားပြည်သူများကိုယ်စား များစွာကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ယူလျက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြလိုသည်။၅။ ဤ (၆၁) နှစ်တာကာလအတွင်း ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့အား ခေါင်းဆောင်မှုပေးခဲ့ကြသည့် အဆက်ဆက် သောခေါင်းဆောင်များနှင့်တကွ (၆၁) နှစ်တာကာလအတွင်း ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့၏ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ကိုယ်ကျိုးစွန့်အသက်ပေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည့်အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများအားလုံးကို ဂုဏ်ယူစွာ ဦးညွတ်အလေးအမြတ်ပြုပါကြောင်း ဖော်ပြရင်း ဤသဝဏ်လွှာကို ပေးပို့အပ်ပါသည်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၈/၂၀၂၁) ပြုလုပ်
20 October 2021 သတင်း
၁၉ အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၁ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး (၂၈/၂၀၂၁) ကိုကျင်းပခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးမှာ ယာယီသမ္မတ နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်တို့က အမှာစကားအသီးသီး ပြောကြားခဲ့ကြသည်။ ယာယီသမ္မတကြီးက အာဆီယံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် စစ်ကောင်စီအပေါ်ကျရောက်နေသည့် ဖိအားများ ဟာ ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေကြသည့် ပြည်သူ့များအတွက် ဝမ်းမြောက်ဖွယ်နေ့ရက်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု များနှင့်ပါတ်သတ်ပြီး ချမှတ်ဖို့တိုက်တွန်းသည့် မူဝါဒများအနေဖြင့် မိမိတို့အခြေခံပြည်သူလူထုကို ကြီးမားစွာ ထိခိုက်စေမည့်အရာများကို သတိထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်ကောင်စီနှင့် စစ်ဗိုလ်များ မတရားကြီးပွားနေသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကို ထိထိရောက်ရောက်ပိတ်ဆို့နိုင်ဖို့အရေးကြီးကြောင်း၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့် အစိုးရသက်တမ်းကာလအားဖြင့် (၆) လသို့ ပြည့်မြောက်ပြီ ဖြစ်သောကြောင့် (၆) လတာကာလအတွင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏တော်လှန်ရေးခရီးအောင်မြင်မှုနှင့် ကျရှုံးမှုများ၊ စိန်ခေါ်မှုများကို သုံးသပ်ပြီး တော်လှန်ရေးအမြန်အောင်မြင်ဖို့ကြိုးပမ်းပြင်ဆင်သွားဖို့လိုကြောင်း များပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်က ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့ တော်လှန်ရေးအတွက် အားတက်စရာ သတင်းတွေ ကြားရတာများကြောင်း၊ မနေ့ကဆိုရင် အကျဉ်းထောင်တွေမှာ မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ (၁၃၁၆)ဦး ၊ မတရားသဖြင့် တရားစွဲဆိုခံနေရသူ (၄၃၂၀) ဦးတို့ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတယ် ကြားသိရလို့ ကာယကံရှင်များအတွက် အင်မတန်ဝမ်းသာမိပါကြောင်း၊ ဒါတွေဟာ ပြည်တွင်းပြည်ပက ကျတော်တို့ ပြည်သူတွေ ကြိုးစားရုန်းကန်မှုရဲ့ရလဒ်ပဲဖြစ်ကြောင်း၊ ဆက်လက်ပြီး ကျတော်တို့ရဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အပြစ်မဲ့အကျဉ်းချခံထား ရသူတွေအားလုံးလည်း အမြန်ဆုံးလွှတ်မြောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အခုဆိုရင် ပြည်သူတွေနဲ့အတူ့ ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ သံအမတ်ကြီးရဲ့ဘက်ပေါင်းစုံက ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုတွေကြောင့် နိုင်ငံတကာအခြေအနေတွေကလည်း တဖြေးဖြေးချင်း အားတက်စရာတွေရှိလာတာ တွေ့ရကြောင်း၊ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းဆိုရင်လည်း ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အစည်းအဝေးတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေ ကမ္ဘာကသိအောင် တောက်လျှောက်ပြောကြားနေပြီး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ရဲ့ အားထုတ်မှုတွေ ကလည်း အားရစရာကောင်းကြောင်း၊ တစ်ဘက်က ပြည်တွင်းအခြေအနေမှာလည်း ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခိုလှုံလာကြတဲ့တပ်မတော်သားတွေ၊ ရဲဝန်ထမ်းတွေက ပိုပိုများလာတယ်လို့ကြားသိရကြောင်း၊ ပြည်သူ့ခုံခံကာကွယ်စစ်ကြေညာပြီး တစ်လအတွင်းမှာ တပ်မတော်သား ၄၂၉ ယောက်၊ ပြည်သူ့ရဲ ၃၃၄ ယောက် ပြည်သူ့ဘက်ကို ပူးပေါင်းလာကြတယ်လို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာတွေ့ရကြောင်း၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လည်း ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က CDM ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ယာယီအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ မီးသတ်ဝန်ထမ်းများကိုယ်စားပြုကော်မတီ နဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာန CDM ဝန်ထမ်းများအုပ်ချုပ်ရေး ကော်မတီတို့ကို ထပ်မံဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်း တွေ့ရတာမို့ ကျတော်တို့အစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာ ပိုမိုပြီး စနစ်တကျတွေဖြစ်လာကြောင်း၊ အခုဆိုရင် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ တာဝန်ယူလာခဲ့ကြတာ (၆)လရှိသွားပြီမို့ မိမိတို့ဝန်ကြီး ဌာနများရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြပြီး လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့အပိုင်းတွေပြင်ဆင်ကြဖို့လိုကြောင်း၊ နောက် (၃) လအတွင်း ဘာတွေအောင်မြင်အောင်လုပ်ကြမလဲ ပြင်ဆင်ကြဖို့လိုအပ်ကြောင်း၊ နောက် (၆) လဆိုရင် ကျတော်တို့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ ဒီတော်လှန်ရေးကို ဘယ်လိုအဆုံးသတ်ကြမလဲ ဝိုင်းဝန်းကြိုတင်စဉ်းစား ထားကြရတော့မှာဖြစ်ကြောင်း၊ အခက်အခဲတွေကို တောင့်ခံပေးနေကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက် စဉ်စားပြီး ပိုအားစိုက်ကြိုးပမ်းကြဖို့ဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများအားလုံးကို တိုက်တွန်းချင်ကြောင်း၊ဆက်လက်၍ တော်လှန်ရေးရဲ့ ပထမဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးထောက်တိုင်တွေဖြစ်သော CDM များနှင့်ပါတ်သတ်၍ တော်လှန်ရေးစကတည်းက အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့တောင့်ခံပေးနေကြသော CDM များဟာ အင်မတန် လေးစားစရာကောင်းကြောင်း၊ ကျတော်တို့ဘက်က ပြည်စုံအောင် မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုတွေ အတွက်လည်း အားနာပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း၊ သူတို့တွေအတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုများ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုများ ဖြည့်ဆည်းပေးရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနလက်ကိုင်မရှိတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေလည်း ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးက စနစ်တကျတာဝန်ယူ ကူညီပံ့ပို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လည်း စီစဉ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းများ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်၍ ဝန်ကြီးဌာနများမှ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် တင်ပြဆွေးနွေးကြရာ စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနမှ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ တော်လှန်ရေးကာလအထူး ငွေတိုက်စာချုပ်များ ထုတ်ဝေရောင်းချသွားရန်ကိစ္စကိုတင်ပြဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ Covid-19 ကာကွယ်ဆေးနှင့်ပါတ်သတ်၍ လက်ရှိဆောင်ရွက်ချက်များကို တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနှင့် ပါတ်သတ်၍ မူဝါဒတင်ပြခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁၂) နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
(၇၆) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ၊ တတိယကော်မတီ၏ လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး၌ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများအပေါ် မြန်မာစစ်တပ်မှ ကျူးလွန်နေမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ပြပြောကြားခဲ့။ (နယူးယောက်မြို့၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်)ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းသည် အောက်တိုဘာ လ ၁၄ ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပသည့် (၇၆) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ၊ တတိယ ကော်မတီ၏ လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ကာကွယ်ရေး ဘာသာရပ်အောက်ရှိ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက် သူများ၏ အခြေအနေဆိုင်ရာ အထူးအစီရင်ခံစာတင်သွင်းသူနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှု Virtual အစည်းအဝေး၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။သံအမတ်ကြီး၏ မိန့်ခွန်းတွင် မြန်မာစစ်တပ်အနေဖြင့် သမိုင်းတစ်လျှောက် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်သူများအား ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ပြီး၊ ရာဇဝတ်သားပမာ ပြုမူဆက်ဆံခဲ့ကြောင်း၊ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုများကို စစ်တပ်မှ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ ဖြိုခွင်းပြီးနောက်ပိုင်း အခြေအနေများမှာ ပိုမိုစိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်လာကြောင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူ အများအပြားမှာ ၎င်းတို့၏ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်နှင့် စုဝေးခွင့် တို့ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ကျင့်သုံးမှုကြောင့် မတရား ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်း၊ စစ်တပ်မှ ၎င်းတို့အား ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခြင်း၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း၊ အတင်းအကြပ် ပျောက်ဆုံးစေခြင်းနှင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းတို့ကို ကျူးလွန်လျက်ရှိကြောင်း၊ ထို့ပြင် အမျိုးသမီးများနှင့် LGBTI တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါး စော်ကားမှုများ ခံနေကြရကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အဆိုပါလုပ်ရပ်များမှာ တရားမျှတမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ ခိုင်မာသောသန္နိဋ္ဌာန်နှင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ရပ်တန့်စေခဲ့ခြင်းမရှိကြောင်း စသည်ဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများအပေါ် ဤသို့သော လုပ်ရပ်များ ထပ်မံမဖြစ်ပွား စေရေးအတွက် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများအနေဖြင့် မည်သို့ အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက် နိုင်မည်ကို မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းအား ပူးတွဲဖော်ပြအပ်ပါသည်။၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်၊ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၊ နယူးယောက်မြို့။